अवको राजनैतिक बैकल्पिक शक्ति भनेको समाजवादी पार्टी नै हो :अर्जुन सापकोटा - Dhading Sanchar
धादिङ २६ भाद्र ।
समाजवादी पार्टी धादिङका नेता अर्जुन सापकोटाले अवको राजनैतिक शक्ति भनेको समाजवादी पार्टी भएको बताउनु भएको छ । सरकार विभिन्न काण्डमा फसेको भन्दै नेपाली जनताहरुले बैकल्पिक राजनीति शक्तिको विकल्प खोजिरहेको बताउनुभयो । उनै समाजवादी पार्टीका नेता अर्जुन सापकोट सँग धादिङ सञ्चार प्रा.ली.ले गरेको कुराकानी :
१.अहिलेको राजनीति परिवेशलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
अहिले नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए लामो समयको सफलता पछि बहुमत त्यसमा पनि अहिले दुई तिहाईको सरकार जसले स्थिरता र सुशासनलाई आफ्नो बिन्दुमा राखेर काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो नेपाली जनताको । त्यही आशालाई अहिलेको सरकारको क्रियाकलापलाई हेर्दा त्यत्ति सहयोग गरेको देखिदैन । जनताका अपेक्षाहरु धेरै थिए स्थिर सरकार भईसकेपछि नेपाली जनताले विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनको निम्ती पक्कै पनि अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा राखेका थिए । जुन अवस्था अहिलेको विकसित घट्नाक्रमले सम्भवत पुरा होला जस्तो छैन ।
२.भनेपछि दुई–तिहाई बहुमतको सरकारले पनि जनअपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने हो ?
यसमा के थियो भने चुनावको समयमा ठुला–ठुला राजनितिक दलहरुले आफ्नो एजेण्डा लिएर जाँदा के भनिएको थियो भने नेपालमा कहिल्यै पनि बहुमत आएन, लामो समय देखि अस्थिरता भयो । लामो समयदेखि अस्थिरता भयो, लामो समय सम्म निर्वाचन भएन । निर्वाचन भएता पनि विभिन्न आन्दोलनले नेपाल पिल्सिएको छ । जनताले भरोसा गरेर मत दिएका थिए । त्यो भरोसालाई दुई तिहाईको सरकारले जुन जनपक्षिय काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको कारणले विश्वासमा ढाल्न उहाँहरुलाई केहि कठिनाई भएको हुन सक्छ ।
३.अहिले सरकारमा भएका व्यक्तिहरुको कुरा गर्ने हो भने अहिले अलि हतार भएको आरोप लगाउछन् पनि भन्छन् विकास भईरहेको विकास भएको हेर्नको लागि गाउँ–गाउँमा जानुपर्छ शहरमा वसेर कसरी विकास हुन्छ भन्नु हुन्छ अर्को कुरा समय पर्खिनुप¥यो भर्खर त यति मात्रै भयो भन्नुहुन्छ तपाईको आरोप हो त ?
यो हाम्रो आरोप होईन,के भन्दा उहाँहरुले भन्नु भएको छ गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेर नेपाली राजनितिलाई हामीले तीन खण्डमा विभाजन गर्दा खेरि पहिलो खण्डमा जुन एकिकरणको कालखण्ड थियो। जहाँ पृथ्वी नारायण शाहले शाहस गरेर नेपाललाई एकिकरण गर्नु भयो । दोस्रो कालखण्डमा अहिले जुन स्थापित भएका राजनितिक दलहरुले विभिन्न आन्दोलन विभिन्न किसिमका त्याग गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो । तर जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै नहुने रहिछ । उनीहरुको दैनिक क्रियाकलाप सँग जोडिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था परिर्वतन गर्ने क्रममा नेताहरुमा दुर दर्सिताको कमि देखिएको हो कि, राजनितिक दलमा ईच्छा शक्ति हुदा हुदै विभिन्न बाधा व्यवधान आएको हो कि, त्यो देखिएन । नेपाली जनताले जसलाई विश्वास गरेर निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो जुन साधारण नागरिकको रुपमा जानु भएको थियो । उहाँहरुको जिवनशैली परिवर्तन भयो तर जुन मत दिएर पठाउने जनताको जिवनशैली परिवर्तन भएन । जनताको आधारभुत आवश्यकता जब सम्म पुरा हुदैन तब सम्म अस्थिरता भईरहन्छ ।
४.तपाई नयाँ शक्ति पार्टीमा आवद्ध हुनुभयो त्यसपछि क्रियाकलाप गर्नुभयो र बीचमा नयाँ शक्ति पार्टीका लहर पनि देखिएको थियो अचानक समाजवादी पार्टीसँग मिल्नुपर्ने नयाँ शक्ति आफैलाई केहि समस्या प¥यो कि या जनमत छैन जस्तो लाग्यो कि के हो बताई दिनुस् न ?
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्राईले आफुसँग भएको विभिन्न सेवा सुविधाहरु त्यागेर विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनहरुलाई अब संस्थागत गर्नको लागि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ शक्ति पार्टीको गठन गर्नु भएको थियो । त्यो गठन गर्ने क्रममा उहाँले तीन वटा विकल्पमा नयाँ शक्ति बन्छ भन्नु भएको थियो । एउटा थियो हामी आफै नयाँ बनाउने कसैसँग सहकार्य नगर्ने नयाँ–नयाँ मानिसहरु ल्याउने पूर्वप्रशासकहरु ल्याउने, वरिष्ठ संचारकर्मीहरु ल्याउने मानव अधिकारवादहरु ल्याउने विभिन्न क्षेत्रका विद्धहरु ल्याएर एउटा पार्टी बनाउने । त्यो सम्भव भएन भने हामीले वृहत धुर्विकरणको एजेण्डामा जाने जुन परिवर्तनशिल शक्तिहरु बीच एकता गरेर जाने । त्यो विकल्पमा पनि भएन भने विचार र एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरु सँग कार्यकर्ता एकता त्यहाँ भन्दा माथि दल नै एकता गर्न परे पनि तयार हुनुपर्छ यी तीन वटा विकल्पमा नयाँ शक्ति बन्छ भन्नु भएको थियो । हामीले स्थानिय स्तरको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिले जुन मत ल्याएको थियो त्यो एउटा आशाको एउटा संचार भयो । त्यसपछि संसदको निर्वाचन प्रदेशको निर्वाचनमा पनि त्यही सन्देश दिएको थियो । तर नेपाली जनमानसमा के रहेछ भने जनताहरु अलिकति शक्तिको पछाडी परिरहेको भएको देखियो । जनताहरुले व्यक्ति मनपराउनु भयो तर भोट दिनु भएन । त्यो भईसकेपछि तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एजेण्डा मिल्दा जुल्दा थिए । उहाँहरुले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पुर्ण समानुपातिक सांसद भनेर उठाउनु भएको थियो । नयाँ शक्तिको पासा भित्र पनि त्यही थियो । त्यो हुदै गर्दा पनि जसरी पनि जिम्मेवारी पदमा नगई त्यो काम पुरा नहुने रहेछ । हामीले सबै परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई एक जुट बनाउनु पर्छ भनेर संघियवादी फोरम सँग एकता ग¥र्यौ । यसले हिमाल पहाड तराईलाई एकता बनाएको छ ।
५.जस्तो के सम्भावना छ जनताले के भन्छन् ?
सम्भावना छ । अहिले नेपालको परिस्थतीमा नगरेको कसैलाई पनि होईन । समाजवादी पार्टीले के भनेको छ भने नेपाली काँग्रेस तपाईहरुको कालखण्डमा राम्रो काम गर्नु भएको छ । समाजवादीले तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा मावोवादीले एकता भईसकेको नेकपालाई पनि त्यही भनेको छ । २०५२ सालको जनयुद्ध, ०६२÷६३ सालको वृहत जनआन्दोलन जुन तत्कालिन ७ राजनितिक दल र नेकपा मावोवादीको सहकार्य बाट सम्पन्न भयो त्यो राम्रो छ । त्यहाँ बाट जुन व्यवस्था हुनुपर्ने थियो त्यो भयो । तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैनै त्यहाँ भन्दा अगाडी जाने अलि अग्रागामी सोच भएको राजनितिक दल चाहिन्छ । जनताको चाहाना बुझ्न सक्ने समानुपातिक ढङगले बुझ्न सक्ने राजनितिक दल चाहिन्छ । अहिले समाजवादी पार्टी किन विकल्प भएर आएको भन्दा समाजवादी पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । यो देशको विकास गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रिपति प्रणाली र पुर्ण समानुपातिक सांसद चाहिन्छ । कुन अर्थमा पुर्ण समानुपातिक सांसद चाहिन्छ भन्दा अहिले निर्वाचनमा अलि पहुँचवाला व्यक्ति ढेकेदार ठुला ठुला उद्योगि नेताहरु सँग अत्यान्त्यै निकट रहेका व्यक्ति जसले पैसाको कारण टिकट पाउछन् । त्यो अर्थमा पुर्ण समानुपातिक सांसद भयो भने त्यहाँ सबै समानुपातिक हुन्छन् ।
६.समाजवादी पार्टीमा के त्यस्तो एजेण्डा छ जो अरु भन्दा हामी फरक छाँै जनताकोमा जान्छौ र मन जित्छौ भन्ने छ ?
जुन नेपालि कांग्रेस,नेकपा लगाएतका दलहरु सँग पुरानै शैली रहेको छ । उहाँहरु चुनावको बेलामा मात्रै जनता कहाँ जाने अरु बेलामा जनतालाई वास्ता नगर्ने चुनावको पक्षमा आफ्नो पक्षमा मत ल्याउनको निम्ति के के हरकत अपनाउनु पर्ने हो त्यो उहाँहरुले अपनाउने । समाजवादी पार्टीले के भन्छ भने त्यो समाजको रुपान्तरण गर्नुप¥यो जनताको सुख–दुखको साथी हुनुप¥यो । जुन निर्वाचनको बेलामा मात्रै जनताकहाँ जाने होईन । समाजवादी पार्टीले अर्को कुरा के भनेको छ भने जुन समानताको कुरा उठाईरहेको छ त्यसले गर्दा अहिले ठुला राजनितिक कतै खसारिएको बाहुल्यता तर समाजवादीले भन्छ सबैको समान हैसियत । लामो समय सम्म निर्वाचन नभए पछि जुन विकराल अवस्था थियो । स्थानिय निर्वाचन भयो विभिन्न दलका साथीहरु निर्वाचित भएर जानु भयो । अहिले तपाई स्थानीय निकायमा हेर्न जानुस् त्यहाँ जनप्रतिनिधी र जनप्रतिनिधिहरुको नातेदारहरु मात्रै पहँुच रहेको छ । किनकि पालिकाका अध्यक्ष वडाध्यक्ष उहाँहरुले योजना तर्जुमा गर्नुहुन्छ । भौतिक पुर्वाधार तयार गर्न चाहिने सामाग्रिहरु उहाँहरु आफ्नै छ । हामीले सबै शासनलाई हेदै जादा दुई तिहाईको सरकारलाई पनि हेरियो । देशको सबै तहमा हेर्नुस् चरम भ्रष्टाचार, एउटा कुनै तस्करले देश चलाए जस्तो, एउटा कुनै गिरोहले सरकार चलाएको जस्तो देखियो । त्यो हुन हुदैन । दुर्ई तिहाईको सरकार भएको स्पष्ट भिजन सहित राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ । त्यो भईसकेपछि जनताले के भन्न थालेका छन् भने समाजवादी पार्टीको एजेण्डामा पनि ठिक छ र समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पनि ठिक छ । अबको विकल्प समाजवादी पार्टी हुन्छ भन्ने तराई, हिमाल, पहाड क्षेत्रमा एउटा आभाष भईसकेको छ । हामी जादा पनि त्यो सुन्न पाईन्छ । अब जनताले विकल्प खोेजिरहेका छन् ।
७.धादिङलाई सुरु देखि हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट कै बहुल्यता भएको देखिन्छ अब यस्तो क्षेत्रमा समाजवादी पार्टीको भिजन कस्तो छ ?
नेकपाको सरकारलाई संख्यात्मक हिसावले उहाँहरु अगाडी हुनुहुन्छ । तर त्यो संख्यालाई उहाँले गुणात्मक रुपले ढाल्न सक्नु भएन । यो अवस्थामा हामी स्थानिय निकायहरुमा जान्छौ । त्यो स्थानिय निकायमा रहनु भएको जनताहरुको समस्या के छ,जनतासँग हामी प्रत्यक्ष संवाद गर्छौ । त्यो समस्या समाधानको निम्ति त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले चासो दिनु भएको छ कि छैन । उहाँहरु पनि नातावाद कृपावादमा हुनुहुन्छ कि र उहाँहरु निष्पक्ष जनताको काम गदै हुनुहुन्छ हामी गदै गरिरहेका हुन्छ । हामी स्थानिय निकायमा स्थानिय सरकारमा उहाँहरुले गर्नु भएको सकारात्मक कार्यलाई रचनात्मक सहयोग गदै उहाँहरुले जुन जनताको पक्षमा काम गर्नु हुन्न भने हामी प्रत्येक घर–घरमा जान्छौ हाम्रो एजेण्डा भन्छौ । त्यसपछि गएर उहाँहरुले गरेका कमजोरीहरु बाटो यो होईन यो हो भनेर बाटो देखाउन सक्छौ ।
८. कल्पना धमला नया शक्ति सिर्जना गर्दाको मान्छे तर पछि आएर उहाँ बीचमा जानुभयो यो समाजवादी पार्टी प्रति असन्तुष्टि देखिएर हो कि भविष्य नदेखिएर हो तपाई त्यसको सदस्य भएको हिसावले के देख्नुहुन्छ ?
यो विषयमा मैले भन्नुपर्दा कल्पना धमला हाम्रो आदरणिय नेतृ हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नै हामीलाई अबको विकल्प नयाँ शक्ति हो । अहिले विद्यमान रहेका राजनितिकहरु सँग हाम्रोे जल्दा बल्दा सकिदैन हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिदैन भनेर उहाँहरुले हामीलाई प्रशिक्षण दिनु भयो । उहाँहरु सँग हामीले लामो समय सम्म काम गरेका थियौ । त्यो गदै जादा के हुदो रहिछ भने यो समाजमा र राजनितिक क्षेत्रमा पनि दुई प्रकारका मान्छेहरु हुदो रहिछ । एउटा व्यक्ति जुन अभियानमा लागि सकेको छ परिणाम नआईसकेसम्म निरन्तर लागि रहन्छ चाहे त्यो कठिनार्इं होस् चाहे त्यो सहज होस् र अर्को प्रकितको व्यक्ति छिटो लाग्ने छिटो परिणाम खोज्ने ।
९.कतिपय हामीले सामाजिक संजालमा समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ तर कतिपयले जाने ढोका र आउने ढोका उस्तै छ भन्ने गर्छन के हो ?
त्यो विषयमा मलाई के लाग्छ भने यो प्रवेश गर्ने भनेको एउटा समुह हुन्छ त्यो समुहले कुनै पनि पार्टी टिक्दैन रहेछ । तपाईले विगतलाई हेर्ने हो भने पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा मावोवादी सबै भन्दा ठुलो दल भयो त्यसपछि दोस्रो निर्वाचन हुने बेला तिर सबै नेकपा प्रवेश गरेका थिए । जुन सुकै पार्टी पनि जुन स्थिर भएर बस्छ त्यसले पार्टीको गन्तव्य पैलयाउछ । प्रवेश गर्नेले त्यक्ति ठुलो असर पादैन रहिछ । तर पनि नेपाली समाजमा जुन अहिले स्वतन्त्रताको आफुलाई मन परेको पार्टीमा प्रवेश गर्न पाउने । जो स्थायी छ त्यसले नै राजनितिलाई उउटा गन्तव्यमा पु¥र्याउछ ।
१०. समाजवादी पार्टीले अहिले के गरि रहेको छ ?
अहिले हामीले तत्कालिन नयाँ शक्ति र संघिय समाजवादी फोरम बीच एकता भईसकेपछि बनेको समाजवादी पार्टीले प्रदेशमा,केन्द्रमा र विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि एकता गर्ने क्रम जारी रहेको छ । त्यहि सन्दर्भमा भाद्र ७ गते धादिङ काठमाण्डौ सम्पर्क समितिको वृहत भेला सम्पन्न भयो । धादिङमा पनि हामीले संघिय समाजवादी फोरममा पनि केहि साथीहरु आवद्ध भएको भेट्यौ । अहिले संघिय समाजवादीका साथीहरु र हाम्रो तत्कालिन नयाँ शक्तिका साथीहरु बीच कसरी यो पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । फेरि त्यो एकता नेकपाको एकता जस्तो नहोस् । जो समाज परिवर्तनको ईच्छा राख्ने क्षमतावान नेतालाई नेतृत्व दिनुपर्छ र त्यसको सारथी समेत बन्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौ । केहि दिन भित्रै हामीले धादिङमा पनि बैठक राख्छौ हामीले यसलाई निश्कर्षमा ल्याउछौ ।
११.जिल्लाले अब नेतृत्व पाउछ ?
जिल्लाले नयाँ नेतृत्व पाउँछ । हामीले एकता गर्ने सन्दर्भमा पुरै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।साथीहरुले नयाँ नेतृत्वको महशुस गर्नु भयो भने हामी सँग सबै साथीहरु राजनिति बुझेका साथीहरु हुनुहुन्छ हामी आपसी सहमतिमा बाट नै टुङग्याउछौ ।
१२. जस्तो उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्राई उहाँहरुको राजनिति पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने लामो छ यो दिर्घकालिन रहला ?
रहन्छ, कसरी रहन्छ भने उहाँहरुको आ–आफ्नै स्थान रहेको छ । उहाँहरुमा एउटा ईच्छा शक्ति छ, उहाँमा केहि स्वार्थ देखिदैन । कसरी हुन्छ देशलाई विकसित बनाउने र उपेन्द्र यादवले पनि एउटा मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै मधेशका जनताहरुलाई कसरी अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा ठुलो त्याग गर्नु भएको असल नेता । हाम्रो समाजवादी पार्टीले के गरेको छ भन्दा पार्टीको सर्वोच निकाय जसको अध्यक्षमा बाबुराम भट्राई । यदि पार्टीलाई समस्या परेको बेलामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहन्छ । पार्टीको केन्द्रिय समिति जसको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई हामीमा पदिय जिम्मेवारीमा पनि बाँडफाँड भएको छ कुनै समस्या आउदैन ।
१३. समाजवादी पार्टी हुर्किदै छ अझै संघर्ष गर्दै जाला कि के–कस्तो होला ?
अब अहिलेको परिस्थती हेर्दा अंक गणितीय हिसावले हेर्दा ठुला दल नेपाली कांग्रेसको तुलनामा केहि कमजोर देखिन्छ । तर यसमा स्पष्ट भिजन रहेको छ । हिमाल, पहाड तराईलाई हेर्ने दृष्टि अहिले स्थापित राजनितिक दलहरुमा छ । त्यसलाई चिर्दै सामाजवादी पार्टी लागेको छ । अब समाजवादी पार्टी ती ठुला दलहरु सँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडी बढ्ने छ । अब तीन राजनितिक दलहरु सँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसपछि जनतालाई रोज्न लगाउछौँ । अब हामी एकता प्रक्रिया सकेपछि जनताकहाँ जान्छौ । विशेष गरि स्थानीय स्तरमा जानेछौँ ।
१४. धादिङलाई पहिलेकै जस्तो बनाएर जोगाएर राख्न के गर्नुपर्ला ?
हामी जब सत्यको पक्षमा अडिक रहन्छौ जुन हामीले विश्वास गर्ने जनता छन् उहाँहरुको विश्वास हामीले लिनुपर्छ । हाम्रो नेता नेतृ यता उता हुदैमा हाम्रो एजेण्डा यताउता भाको छैन ।
१५. अन्त्यमा केहि भन्न चाहानुहुन्छ ?
स्थापित राजनितिक दलहरुले गर्नु भएको कुराहरु त्यो जुन–जुन कालदण्डमा नेतृत्व गरेर आउनु भयो त्यो ठिक थियो । तर अहिलेका अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि तपाईको त्यो योजना पुगेन समाजवादी पार्टीको स्पष्ट योजना छ आउनुस् सक्नुहुन्छ भने रचनात्मक सहयोग गर्नुस् सक्नुहुन्न भने समाजवादी पार्टीलाई लखेट्ने काम नगर्नुस् ।